MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): December 2008
Welcome 31 & Bye Bye 30
My Labels: 31-Dec-1977, Birthday
Posted by MgHla မောင်လှ at 4:14 pm
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး... ညီမင်းစံ (ခ) သခင်စိုးကြီး (Not သခင်ကြီး) (ခ) BaganNAT ဓာတ်ပုံကို အဖြူအမည်းနဲ့ တင်မယ် လုပ်ပြီးမှ .. မကောင်းပါဘူးလေ ဟိုပြင် ဒီပြင် လုပ်ဦးမှ ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာ ဒီလိုဖြစ်သွားရော...
ဒါနဲ့ .. စကားမစပ်...
တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၅း၅၀-နာရီ လောက်က မန်းလေးရဲ့ မြောက်ဘက် ၅၅-မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြုပြီးတော့ြေါညငအကိန ၄.၇ ရှိတဲ့ ငလျင် လှုပ်သွားကြောင်းပါ... ငလျင်မလှုပ်ခင် တစ်ပတ် မတိုင်ခင်မှာ ရာသီဥတုမှာ အရမ်းအေးပြီး ငလျင်လှုပ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ အအေးပြန်လျော့သွားပါတယ်... ငလျင်နဲ့ ရာသီဥတု အပူချိန် ပတ်သတ်မှု ရှိလား မရှိလားတော့ မသိကြောင်းပါ... Google နဲ့ ရှာကြည့်တော့ ပုံအောက် လင်ခ်ထဲမှာ ငလျင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေ တွေ့တယ်...
ဒီမှာ မခင်ဦးမေ က “ခါးမှာ ချိတ်ထားတာ ဗျောက်ကြီးထင်လို့။ :P” လို့ပြောတားတာကို ဖြေရှင်းပါရစေ... အဲဒါ ဗျောက် မဟုတ်ကြောင်းပါ... “ဟလို .. ဟလို ... ကြားလား ကြားလား..” ခဏ ခဏ အော်ရတဲ့ ပါလေရာ ဖုန်းလေးပါ..
ကျတော့် blog မှာ Followers လုပ်ထားသူများကို ကျေးဇူး အထူးတင်ကြောင်းပါ... ကျတော်မှာတော့ Greader နဲ့ ဖတ်နေရတဲ့ အတွက် follow မလုပ်နိုင် comment မရေးနိုင် မပြန်နိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါသည်...
စိုးမင့်ခန့် မေးထားတဲ့ © အမှတ်အသား ကို ဘယ်လို လုပ်ထားလဲဆိုတော့...
၁. ဓာတ်ပုံရဲ့ အပေါ်မှာ Text tool ကို သုံးပြီး © စာသား ရိုက်တယ်...
၂. အဲဒီ layer ရဲ့ opacity ကို 20% , Fill ကို 0% ထားလိုက်ပါတယ်... အဲဒါတွေက Layers box ထဲကနေ ပြောင်းရတာပါ...
၃. အဲဒီ layer ကိုပဲ Layer Style (Layer Effect) ထဲက Bevel and Emboss ထည့်ထားတာပါ...
Posted by MgHla မောင်လှ at 9:18 am
Posted by MgHla မောင်လှ at 3:37 pm
Bagan Photos #8
Posted by MgHla မောင်လှ at 12:30 am
Bagan Photos #7
ကျောင်းဆင်းပေမယ့် မဆော့နိုင်သေးဘူး... ကျောင်းဝတ်စုံတောင် မလဲဘဲ ဈေးသွားရောင်းရဦးမယ်...
ညဘက်ကြီး ဒီ post တက်လာလို့ အံ့သြမနေပါနဲ့ ကိုရန်အောင် ဒီမှာပြောထားတဲ့ နည်းနဲ့ တင်တာပါ... ကျေးဇူးပါ ကိုရန်အောင်...
Posted by MgHla မောင်လှ at 10:15 am
Bagan Photos #6
Posted by MgHla မောင်လှ at 9:08 am
ဒီအပေါ်က ပုံကိုရဖို့ အောက်က ပုံထဲမှာ မြင်တဲ့ အတိုင်းရိုက်ခဲ့ရတယ်... အောက်ကပုံကတော့ ညီမင်းစံ (ခ) သခင်စိုးကြီး ရိုက်ထားတာပါ... နွားအုပ်နဲ့ ၅-ပေ ၆-ပေ လောက်ပဲ ကွာတဲ့အချိန် ကျတော်တစ်ယောက်တည်း နွားအုပ်ရှေ့မှာ ရိုက်လို့ ကောင်းနေတုန်း နောက်လှည့်ကြည့်တော့ ကိုသခင်ကြီးရယ်၊ ညီမင်းစံတို့ မြင်းလှည်းနောက် အကွယ်ရောက်နေကြပြီ...
Bagan Photos #5
Posted by MgHla မောင်လှ at 10:00 am
Bagan Photos #4
Bagan Photos #3
Posted by MgHla မောင်လှ at 5:13 pm
Bagan Photos #2
Posted by MgHla မောင်လှ at 10:49 am